Vachitaura pamusangano wekuzeya gadziriro dzegore rino uyo wakarongwa neMedia Alliance of Zimbabwe muHarare, munyori mukuru weSADC PF, Doctor Esau Chiviya, vanoti masangano ose anoongorora sarudzo anotarisa mashandiro evatori venhau uye kushanda kwavo vasingambunyikidzwe kunowedzera mukana wekuti pave nesarudzo dzakachena.
Doctor Chiviya vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vaitewo basa ravo zvakanaka vasinga buritse nhau dzinogona kukonzera mhirizhonga munyika.
Vanotiwo makambani enhau ehurumende anosungirwa kupa mapato ese mikana yakaenzana.
Vanoti zvakabuda musarudzo dzese dzavakaongorora munyika zhinji muSADC zvinoratidza kuti makambani ehurumende anenge achitsigiria bato rinotonga ukuwo makambani akazvimirira mazhinji achitsigira mapato anopikisa.
Doctor Chivhiya vanoti havana zvavangataura pamamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pari zvino vachiti vachatuma chikwati chesangano ravo kuzoongorora sarudzo mwedzi miviri sarudzo idzi dzisati dzaitwa.
Murairidzi wepaUniversity of Zimbabwe, VaLawrence Mandara, vanoti kunyange hazvo kuenda kwaVaRobert Mugabe kwakaunza tariro yekuti nyika inokwanisa kuita sarudzo dzakachena uye VaEmmerson Mnangagwa vachivimbisa kuti vachaita sarudzo dzakajeka, hapana chiri kuitika chinoratidza kuti sarudzo dzichange dzakachena.
VaMandara vanoti mitemo yesarudzo nekutapwa kwenhau haisati yavandudzwa uye pane kunyunyuta muvanhu nemapato anopikisa maererano nemamiriro pamwe nemashandiro eZimbabwe Electoral Commission.
Sachigaro veMedia Institute of Southern Africa-Zimbabwe, VaGolden Maunganidze, vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuti hurumende yaVaMnangagwa haina zvairi kuita kuvandudza mitemo yemashandiro evatori venhau kunyange hazvo SADC muongororo yayo pasarudzo dza2013 yakati mitemo iyi inofanira kuvandudzwa.
VaMaunganidze vanotiwo havasi kufara nenyaya yekuti mhirizhonga mumapato ezvematongerwo enyika yave kubata batawo vatori venhau.
Vanoti vanofara chose kuti MISA nemamwe masangano anomirira vatori venhau vari kuita misangano nemapurisa nechinangwa chekunatsururdza hukama hwavo pamwe nekuti vashande zvakanaka pasina kushungurudzana.
Mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe, VaNigel Nyamutumbu, vanoti musangano uyu wange uri wekuongorora kuti vatori venhau vangaite sei apo vari kugadzirira sarudzo pamwe nekuti chii chavangaite kuti mitemo yemashandiro avo yavandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa.
Zimbabwe ichaita sarudzo yemutungamiriri wenyika, sarudzo dzeparamende nemakanzuru mumwedzi mishoma inotevera.